Hlola i-Lima, Peru - World Tourism Portal
Hlola i-Lima, Peru
Uhambo losuku kusuka eLima
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeLima
Bukela ividiyo ekhuluma ngeLima
ILima iyinhloko-dolobha ye Peru nedolobha lazo elikhulu kunawo wonke. Yasungulwa e-1535 ngumnqobi waseSpain uFrancisco Pizarro, leli dolobha lesimanje liyingqophamlando yokuhlangana kwedolobha lesimanje le-mega enezinye 'iziqhingi zesimanjemanje', izindawo ezinkulu ezinamatshe kodwa ahlelekile nobumbono bekoloni enkabeni yedolobha. Hlola i-Lima okwakuyisihlalo sobukhosi baseSpain phakathi kweminyaka ye-300, futhi ngenxa yalokho inamasonto amangalisayo, ama-monitor kanye nezindlu zezindela ezikufanele ukuvakashelwa.
ILima futhi iyindawo enhle kunazo zonke yokuzama i-cuisine enhle yasePeru, enezinhlobonhlobo ezinkulu zezithako ezivela ezifundeni ezisogwini, ezintabeni nase-Amazon. Ulwandle olubandayo olukhona phambi kogu olukhulu lwasePeru lwenza ulwandle lucebe kakhulu ezinhlanzini nasekudleni kwasolwandle, okunambitheka enhle ngenxa yeplankton ekhethekile abayidlayo. Izindawo zokudlela zokudla kwasolwandle nezasolwandle ziyasifanele isikhathi, futhi azibizi.
ILima yakhelwe esigodini esizungezwe yinkangala eyomile impela. Ehlobo, isimo sezulu sivame ukuba sihle, sifudumele kakhulu futhi sishiswe yilanga, kwesinye isikhathi kube nezimvula cishe ngoJanuwari. Ebusika, leli dolobha likhithika futhi lina izinsuku eziningi ngasikhathi. Imvula ngesikhathi sasebusika ayina kanzima, kepha imanzisa yonke into. Ukushisa futhi kwehlela cishe nge-7-12 C⁰, okubonakala sengathi kwakubanda lapho kuhlangene nomphumela ovamile.
IMetropolitan Lima iyidolobha elikhulu labantu abacishe babe yizigidi ezingama-8.5. Iningi lalaba bantu lisuke ezintabeni zase-Andes libalekela ingxabano yangaphakathi eqala kuma-1980's ukuthola umsebenzi nesiphephelo eLima, abanye, ngaphandle kwempumelelo. Ngalesi sizathu, kukhona ubuphofu obukhulu enkabeni yedolobha nasezindaweni eziphelele. Uma ungena eLima, into yokuqala oyibonayo lapho usuka esikhumulweni sezindiza uhlala ikakhulukazi usebenza phakathi, esikhungweni sezindiza esiphakathi nendawo nesikhumulo sezindiza sakwaLima.
Ukwakhiwa kukaLima ngaphambi kwe-Hispanic nokwakhiwa kwamakoloni kuyinto enhle futhi leli dolobha lineminyuziyamu eminingana (enjengeMyuzio Larco) elandisa izindaba zezwe elinomlando omude okhiqize inqwaba yezimpucuko zasogwini nase-Andean (njengeMoche, Chavin, kanye nama-Inca) namasiko amaningi endawo. Kuneziza eziningana zemivubukulo yangaphakathi nangaphakathi nedolobha (endaweni yakamuva ebizwa ngokuthi i-huaca).
Ukuqashwa kwezimoto kuyatholakala esikhumulweni sezindiza nge-Avis, Ibhajethi, iDollar, iHertz, neNational, kodwa ngaphandle kokuthi unolwazi lokushayela ezindaweni eziyinselele kakhulu kufanele ugweme ukuzishayela eLima.
Njenganoma yikuphi, ukubheja kwakho okuhle kakhulu kuvame ukumane udonse imali kwi-ATM. Kunamabhange afakwe kulo lonke iLima kanti amanye awo aqaphe ama-ATM. Amathuba ibhange lakho lizokukhokhisa imali eningi ngaso sonke isikhathi uma ukhipha imali ngakho-ke kunenzuzo engcono ukuthola okuningi ngangokunokwenzeka lapho wenza imali.
Izimakethe Av. ILa Marina eSan Miguel isendleleni eya esikhumulweni sezindiza. Umqondo kungaba ukuthi ume lapho uyothenga khona okokugcina ngaphambi kokuhamba ezweni. Lezi zimpahla ziyefana nezika-Av. I-Petit Youars, kepha njengoba indawo ingaphansi kakhulu futhi abavakashi abambalwa beza lapha, amanani entengo aphansi.
IGamarra Jr. IGamarra eLa Victoria iyimakethe yezindwangu ebabazekayo, ngokunokwenzeka enkulu kunazo zonke eSouth America. Ukuthatha amabhlogo we-24, iGamarra inezitolo zezindwangu ezingaphezu kwe-20.000 futhi ithola izivakashi ezingaphezu kwe-100.000 ngosuku. Ungathola noma yiluphi ucezu lwezingubo ongazicabanga futhi ungathola eyakho idwetshwe komunye wabakhiqizi. Amanani ashibhile kakhulu kunasesigodini saseMiraflores kodwa imvamisa asezingeni eliphansi. Njengabavakashi, bangakujaja ngokwengeziwe ngakho-ke zilungiselele ukushwabana. Uma uyothenga eGamarra, qaphela amakhethini. Kungcono ukuhamba ne-Peruvian noma nabanye abavakashi abambalwa njengoba umakhelwane ungaba dodgy futhi kungaba khona amaphakethe. Indlela elula yokufika lapho ukusuka eMiraflores ukuthatha iBenavides Street uye e-Ovalo Higuereta. Lapho ungathatha iMetro (hhayi iMetropolitano) bese wehla esiteshini saseGamarra.
I-Larcomar Malecon de la Reserva N ° 610. I-Miraflores. Ungathola iLarcomar ekugcineni kweLarco Street esifundeni saseMiraflores, ngakwesokudla emadwaleni. Lesi sikhungo sokuthenga singesinye esithanda ukwedlula zonke eLima futhi sinezinhlobo zonke zezingubo zohlobo lwesizwe nezamazwe aphesheya, njenge-Adidas, Caterpillar, Desigual, Converse, Esprit, njll. Futhi sinendawo yokudlela eminingi nemigoqo eminingi kanye namakilabhu.
Uma unesifiso sokuthenga izinsimbi zomculo zomdabu zase Peru, kunezitolo eziningi ezithengisa ama-charangos, ama-quenas, ama-antaras, njll. E-Calle Cantuarias khona lapho eduze nase-Astrid y Gastón. Uma unesikhathi, inqwaba yalezi zitolo ingakusiza ekutholeni uthisha ukuthi afunde ukudlala ukuthenga kwakho.
I-Gastronomy ibilokhu ikhona, kusukela ezinsukwini zobukhosi baseSpain, okwabalulekile empilweni eLima. Eminyakeni embalwa edlule, noma kunjalo, idumela ledolobha lokudlela libhekane nokuxhuma okukhulu emehlweni omhlaba ngenxa yokuthi ochwepheshe babuthana Engqungqutheleni Yesine Yezwe yeGastronomy Madrid UFusión 2006 futhi ngokusemthethweni wamemezela uLima njenge- "Gastronomy Capital of the America". Iminikelo eLima kulezi zinsuku ihluke kakhulu futhi imboza izinhlobo nezinhlobo ezahlukahlukene zokudla, zombili zesifunda nezamazwe aphesheya.
Naphezu kokukhetha okubanzi ezindaweni zokudlela eziningi zaseLima, i-ceviche ngokuqinisekile ingunombolo wokuqala kuhlu lwezitsha okufanele uzazi, hhayi ngoba ziphenduka "izitsha zikazwelonke zasePeru", kepha ngenxa yokunambitheka kwawo okumnandi okungenakuqhathaniswa. Ngentshiseko eyandayo yokudla okuphekiwe kwePeru, i-ceviche isheshe ingena ematafuleni emhlabeni wonke. Kepha uma ufuna ukujabulela into yangempela, ungaphuthelwa ngesikhathi uhlala lapha eMecca ye-ceviche. Kukhona okungenani i-cevichería eyodwa kuyo yonke indawo, ngakho-ke ngeke kube nzima ukuyithola. Ngaphezu kwalokho, izindawo eziningi zokudlela ze-criollo zifaka i-ceviche kumamenyu abo; yebo, zokudlela eziningi zenziwa, kanye ne-nouveau-cuisine ephezulu kakhulu.
Isexwayiso sokuthi uzodla nini i-ceviche
Abantu bendawo bakwenza umthetho wokuthi bangadli i-ceviche sekwedlule usuku ngoba yonke i-ceviche yenziwa kusukela ekubambeni okusha kwaseCorvina (eChilean Sea Bass), yingakho ungeke uthole kalula i-cevicheria evulekile ngemuva kwe-5PM.
Okwesibili kufanele kuyiwe e-cuisine yase-Eshiya, amaShayina namaJapane, aqagela, anethonya elinamandla lePeru. IChifas -okungukuthi, izindawo zokudlela zamaShayina-, ezingabalwa ngamakhulu uma kungenjalo izinkulungwane, imvamisa ukudla okuphakathi komhlaba, okunikeza imali yokudla okucebile kwasolwandle nenkukhu. Izindawo zokudlela zaseJapan, ngakolunye uhlangothi, azisakazeki kakhulu, futhi ziyanda futhi zibiza kakhulu. I-forte yabo, kunjalo, okuwukuphakelwa konyaka wonke kwezinhlobo zasolwandle ezisanda kusungulwa nezinhlobonhlobo.
Ukudla kwasePeru kuvame ukuba nezinongo futhi kusindise. Yizame nangendlela futhi ubuze ukuthi ngabe kukhona isidlo se-picante (isipayisi), futhi uma ungakuthandi lokho, sikugweme ngoba kungenzeka kube yi-picante yangempela. Ukudla okugcwele kungasinda ngempela futhi kudale izinkinga noma ngabe kukuhle ngokuphelele futhi kulungiselelwe kahle ngezithako ezintsha.
Kukhona ubukhona obunzima bamaketanga asheshayo wokudla waseNtshona afana ne-KFC, iBurger King, iPizza Hut, i-Domino's Pizza, iMcDonald's, i-Subway ne-Starbucks Coffee kulo lonke idolobha uma ungafuni ukuzama noma yini okusha kuwe. Izindawo ezinjengeChili kanye nangoLwesihlanu ziyindlala, kepha zitholakala kalula ngaseMiraflores. Futhi, akufanele uphuthelwe ama-hamburger wesitayela sePeru e-Bembos noma amasangweji endabuko wasePeru ePasquale uma ufuna ukunikeza ukudla kwakho kwansuku zonke okusontekile okusontekile.
I-Lima iyikhaya lezindawo zokudlela ezi-220,000 ezungeze i-800, amathofi, imigoqo yejusi futhi iqhuba uhlelo (i-Restaurante Saludable) ukubona izindawo zokudlela ezihlanzekile nezinempilo. Kuzungeze i-1.2 noma i-XNUMX% yezindawo kuphela ezithole lo mklomelo, ngakho-ke gcina amehlo akho evulelekile nge-logo ye-Restaurante Saludable.
IPisco Sour isiphuzo sikazwelonke sePeru, esenziwe ngePisco, uhlobo olunamakha olwenziwe ngamagilebhisi. Kunconywa kakhulu ukuthi bonke abavakashi abadala ePeru bazame lesi siphuzo okungenani kanye ngaphambi kokuphuma ezweni. Izivakashi zingamangazwa ukuzwa ukuthi impikiswano ikhona phakathi kwePeru nomakhelwane wayo uChile mayelana nokuthi izwe labo lidale ini ngempela i-Pisco Sour, yize izindlela zokupheka zaseChile nasePeru zingafani. Ukwehluka kufaka iMaracuya Sour, iCoca Sour neChicha Sour futhi kuhlinzekwa ngemigoqo eminingana yedolobha. Vele uqaphele ngakho; ukunambitheka okusha nokumnandi kwenza kube lula ukuphuza ngokweqile, futhi ungadakwa kalula.
I-Inca Kola yisiphuzo esithambile esithandwayo Peru, elinye lama-sodas ambalwa i-Coca Cola engakwazanga ukuwahlula (aze ayithenga inkampani). Yisiphuzo esinezithelo eziphuzi esiphundu esithanda ukunambitheka njengo-ayisikhilimu.
IJugos Ungathola iziphuzo ezinhle zithelo ezintsha kulo lonke iLima. IStididos, equkethe izithelo eziningana ezihlukene imnandi kakhulu.
I-Chicha Morada Isiphuzo esiqabulekile sokuphuza onsomi esiphakeme kuma-antioxidants. Kwenziwa ngokubilisa ummbila onsomi ngephayinaphu, isinamoni, i-clove, noshukela.
Ikhofi. Izitolo ezimbalwa zekhofi ezintsha nezingcweti zobuciko zivuleke kulo lonke leli dolobha, kwaba nenqwaba yezindawo eziseMiraflores, Barranco naseSan Isidro.
IMiraflores, iBarranco neSan Isidro ngezinye zezindawo ezinhle neziphephe kunazo zonke edolobheni. Yize kwesinye isikhathi ziba zimbi kakhulu ukwedlula isikhungo sedolobha elidala nezinye izingxenye, ezinye izinketho zokuhlala zesabelomali zikhona.
Amadolobhana aseLima azungezile asezansi kwezintaba anikezela ukubukwa okumangazayo futhi uhambo oluhle losuku kusuka enkabeni yeLima.
I-Arequipa - Idolobha elikhangayo eningizimu.
ICajamarca — Ibusa i-Carnival ethokozisayo njalo ngonyaka.
ICuzco - isikhungo sempucuko ye-Inca. Amabhasi amakhulu abavakashi ahamba kabili nsuku zonke ngeCruz del Sur.
IHuancayo ingafinyelelwa ngokuthatha uhambo oluhle lwesitimela oludlula e-Andes.
IHuaraz - Isikhungo sezintaba.
Ama-Iquitos ngendiza noma ngePucallpa.
I-Ica— Ngomnyuziyamu omnandi kanye ne-oasis.
ILa Merced— i-7 hr ngebhasi futhi usehlathini.
IMancora- Ugu lolwandle oluphumuza kakhulu enyakatho amaqembu ahlangana ubusuku nobusuku.
INazca— Ikhaya labasendulo nabangaqondakali Imigwaqo yeNazca. Amabhasi amakhulu abavakashi ahamba kabili nsuku zonke ngeCruz del Sur.
IPucallpa - Ingafinyelelwa ngebhasi noma ngendiza futhi ukuphela kwesikejana esikhulu somfula esixhumene nomgwaqo oya eLima. Kungenzeka uhambe ngesikebhe uye e-Iquitos usuka ePucallpa uye emfuleni omkhulu wamazon.
ISan Mateo— 4.5 hr ngaphandle kweLima.
ITarma— I-Pearl ye-Andes.
ITrujillo — Idolobha elisenyakatho nekhaya lamabhange amakhulu e-Adobe ePeru.